Sorona Masina ny 17/12/2020 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 17/12/2020
Iz. 49, 13
Hifaly anie ny lanitra, hiravo ny tany, fa ho avy ny Tompontsika hamindra fo amin’ny mahantrany.
Andriamanitra ô, nahary ny olombelona Ianao ary namonjy azy, ka sitrakao ny nakan’ny Teninao tonga nofo tao an-kibon’ilay Virjiny mandrakizay, henoy amin’ny fo antra ny vavaka ataonay: efa naka ny fomba maha-olombelona anay ny Zanakao Lahitokana, ka enga anie hampiombona anjara anay amin’ny maha-Andriamanitra Azy.
Jen. 49, 2. 8-10
Tsy hiala amin’i Jodà ny tehim-panjakana.
Tamin’izany andro izany, namory ny zanany lahy i Jakôba ary nilaza taminy hoe : “Mivoria, ry zanakalahin’i Jakôba, ka mihainoa. Mihainoa an’i Israely rainareo. Ry Jodà, ianao hoderain’ny rahalahinao ; ny tananao ho eo amin’ny vozon’ny fahavalonao, ny zanaky ny rainao hiankohoka eo anatrehanao. Liona tanora i Jodà: Niakatra avy nandripaka ianao, anaka. Nanongalika izy, dia nanao fandrin-diona, fandrin-diombavy, zovy no hanaitra azy? Tsy hiala amin’i Jodà ny tehim-panjakana, tsy hiala eo anelanelan’ny tongony ny tehim-pahefana, mandra-piavin’i Silao: Izy no hotoavin’ny firenena.”
Salamo 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17
Fiv.: Ny rariny hamony amin’ny andron’ny Tompo, ary ny Fiadanana hitombo mandrakizay.
Andriamanitry ny fahamarinana ô, mba tolory ny andriana mpanapaka sy ny zanak’andriana ho dimbiny ny fahaiza-mitsara ara-drariny!
Ka ny vohitra hitrotro fiadanana. Ny havoana hivimbina ny hitsiny. Ny mahantra sy ny ory hotsimbininy. Ny mpamoritra kosa hofongorana.
Amin’ny androny hamony ny rariny, ary mandra-pahafatin’ny volana. Dia hisy fandriam-pahalemana, lavorary sy feno tanteraka!
Ranomasina no ho sisin-taniny, ary ny ony no ho valam-parihiny; ka ny rafiny ombam-pahavalony handohalika sy hilavo lefona
Ny Anarany hankalazaina sy haharitra toy ny masoandro. Ary indro hatao fitahiana, ireo foko manerana an-tany.
Ianao Filohan’i Davida izay mamoha ny varavaran’ny fanjakana tsy manam-pahataperana, avia ary tsoahy amin’ny fatorany ny voagadra tazonin’ny haizina.
Filazana ny Razan’i Jesoa Kristy, zanak’i Davida.
Filazana ny Razan’i Jesoa Kristy, Zanak’i Davida, Zanak’i Abrahama. I Abrahama niteraka an’i Isaaka, i Isaaka niteraka an’i Jakôba; i Jakôba niteraka an’i Jodà mirahalahy avy; i Jodà niteraka an’i Faresa sy i Zarà tamin’i Tamara; i Faresa niteraka an’i Esrôna, i Esrôna niteraka an’i Arama; i Arama niteraka an’i Aminadaba; i Aminadaba niteraka an’i Naasôna; i Naasôna niteraka an’i Salmôna; i Salmôna niteraka an’i Boôza tamin’i Rahaba; i Boôza niteraka an’i Obeda tamin’i Rôta; i Obeda niteraka an’i Jese, i Jese niteraka an’i Davida mpanjaka. I Davida mpanjaka niteraka an’i Salômôna tamin’ilay vadin’i Oria; i Salômôna niteraka an’i Rôbôama; i Rôbôama niteraka an’i Abiasa; i Abiasa niteraka an’i Asà, i Asà niteraka an’i Jôsafata; i Jôsafata niteraka an’i Jôrama, i Jôrama niteraka an’i Oziasa; i Oziasa niteraka an’i Jôatama; i Jôatama niteraka an’i Akaza; i Akaza niteraka an’i Ezekiasa; i Ezekiasa niteraka an’i Manase, i Manase niteraka an’i Amôna; i Amôna niteraka an’i Jôsiasa; i Jôsiasa niteraka an’i Jekôniasa mirahalahy avy, tamin’ny andro nifindrana tany Babilôna. Ary rahefa nifindra tany Babilôna, i Jekôniasa niteraka an’i Salatiela; i Salatiela niteraka an’i Zôrôbabela; i Zôrôbabela niteraka an’i Abioda, i Abioda niteraka an’i Eliakima; i Eliakima niteraka an’i Azôra, i Azôra niteraka an’i Sadôka; i Sadôka niteraka an’i Akima; i Akima niteraka an’i Elioda; i Elioda niteraka an’i Eleazara; i Eleazara niteraka an’i Matana, i Matana niteraka an’i Jakôba; ary i Jakôba niteraka an’i Jôsefa vadin’i Maria izay niteraka an’i Jesoa ilay atao hoe Kristy. Koa ny taranaka rehetra hatramin’i Abrahama ka hatramin’i Davida, dia taranaka efatra ambin’ny folo; ary hatramin’i Davida ka hatramin’ny nifindrana tany Babilôna, dia taranaka efatra ambin’ny folo; ary hatramin’ny nifindrana tany Babilôna ka hatramin’i Kristy, dia taranaka efatra ambin’ny folo.
Hamasino, ry Tompo, ny fanatitry ny Eglizinao, ka noho izao zava-masina hajainay izao, dia ataovy mendrika hohavaozin’ny mofo avy any an-danitra izahay.
Akj. 2, 7
Indro ho avy Ilay nirin’ny firenena rehetra, ka ho feno voninahitra ny tranon’ny Tompo.
Avy nandray ny fanomezanao masina izahay no mitalaho aminao, ry Andriamanitra Andriananahary: enga anie mba hirinay tokoa hirehitra ao am-ponay ny afo avy amin’ny Fanahinao ka hamirapiratra tahaka ny fanilo manjopiaka hoentinay mitsena an’i Kristy ilay Irakao.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.2658 s.] - Hanohana anay